Geobide, Isbedelka Nidaamka Isku-xirka ED50 iyo ETRS89 - Geofumadas
Nofeembar, 2011 ArcGIS-ESRI, Cartografia, cadastre
Ka faa'iideysiga raacitaanka Suurtagalnimada Geobide Suite, waxaan arki doonaa fursadaha lagu beddelayo Nidaamka Tixraaca. Interesting kuwa waa beddesho u dhexeeya kala duwan Datum kiiskan waan arki doonaa sida loo sameeyo nidaamyo ED50 iyo ETRS89 dhow yahay kiis la mid ah Latin America dhexeeya NAD27 iyo WGS84.
Macluumaadka ma guuray?
Tani ma aha kiiska Google Earth, halkaas oo isbaddallo badan lagu sameeyo, sawirro badan ayaa ku bara kacay, wax taas ah waxaad ku hubin kartaa gidaarada inta u dhexeysa irbadaha kala duwan; Si kastaba ha ahaatee, dalal badan, dalalka ama bulshooyinka goboleedka, hay'adaha dawladda ku arzaaqnayna wax sawiro aad GoogleEarth georeferenced sax ah, iyadoo khasaaro ah in uu isticmaalaa GoogleEarth WGS84 sida Datum generic, sidaas oo isticmaalaya xogta in nidaam kale u baahan tahay isbadal ah. Isbedelku wuxuu ku xiran yahay kan ugu horreeya ee qeexitaankiisa gaarka ah laakiin sidoo kale aagga aynu ku jirno. Taasi waa sababta nidaamyada caansaanka ah ma bixinayaan xuduudaha gaarka ah ee aag kasta.
Qaado tusaale ahaan ka Isbadal ED50-30N (EPSG: 23030) si ETRS89-30N (EPSG: 25830) ee Navarra, iyo Spain. Qeexidda generic ah isbadal ayaa kala heer xagga saxnaanta ku xiran tahay meesha kuwaas oo waxaa laga codsadaa. Sidaa darteed, waxaa jira oo xuduudaheedu yar oo dheeraad ah oo aan ku jira qeexidda generic iyo in Navarra sida in Asturias waxaa yar laakiin waxaa laga yaabaa qiyamka kale.
Haddii aan eegno muuqaalka sawirada sare ee Geomap, waxaynu aragnaa khariidad leh laba lakab (qoryo iyo qulqul) oo u dhexeeya iyaga. Waa natiijada ka dhalatey Cadaster Navarre ee duulimaadka ED-50N ku saabsan lakabka GoogleMaps ee WGS84 iyo barakaca soo baxay waxay la xidhiidhaan dhibaatada lagu sharraxay cutubkii hore.
Tababar dhowaan ka yimid Geobide, kaas oo aan samaynayno maqaalkan hadda daabacay hababka ugu yar ee 4 si loo xalliyo. Marka loo eego Geobide, waxaa iminka suurta gal ah in la tilmaamo qaabka loo yaqaan 'conversion' ee isbedelka u dhaxeeya Isku-xirka Nidaamka afar siyaabood oo kala duwan:
Doorashadani waxay isticmaashaa isbeddelka isbedelka ah iyada oo aan la helin xuduudaha, iyo ugu yaraan sax. Tusaale ahaan, Navarra tusaale ahaan ED50 ilaa ETRS89 waxay leedahay qalad ah ~ 100-200m x iyo y. (Xasuusnow in Tani ma saameynayso nidaamyada isku-duwidda oo leh calaamado isku mid ah).
Waxay jeelyihiin in la mid ah waa ay dhacdo NAD27 la WGS84 socda oo mitir 202 waqooyiga iyo mitir 6 bari ee isbedel aagga Bartamaha sida aad bedesho loolka ah, inkastoo ay tahay muhiim ah oo kaliya in dhulka qaboobaha ay ka timaado Ecuador halka dhererka wuxuu ka yimaadaa bariga beenta ah.
Isbedelka adoo adeegsanaya shabakadda NTV2:
Doorashadan waxay adeegsanaysaa shabakad qiimo leh si loo saxo isbeddelka ku yimaadda isku dhejinta qulqulka. Doorashadani waxay ka badan tahay habka ugu horeysa ee uu soo qaato IGN. Dabcan, dabcan, haddii aan leenahay shabakad goobta shaqada.
Codsiyada Geobide Hadda waxay bixisaa labada waji ee ay bixiso IGN ee Spain, oo ka hadlaysa jasiiradaha Peninsula iyo Balearic Islands, kuwaas oo lagu daabacay 2003 iyo 2009. Isticmaalku si sahlan ayuu u dooran karaa shabakada si uu u isticmaalo.
Internetka waxaad ka heli kartaa shabakado badan, xitaa adduunka oo idil, laakiin xajmiga si toos ah looma heli karo codsiyada Geobide.
Isbedelka Molodensky (habka 3-paramedhees):
3 waxay isticmaashaa qiimaha furfurista asalka asalka udhaxeeya eelfsoids. Wardi hore loo qaabeeyey ayaa lagu taliyey IGN ee Spain.
Isbeddelka Bursa-Wolf (habka 7-parameters)
Isbeddelkani wuxuu adeegsadaa qiimaha 7 si loo bedelo inta u dhaxeysa Eliellos. Xuduudaha lagu galo waa: Daar (Dx, Dy, Dz), Rotation (Rx, Ry, Rz) iyo Ciladda Iskuduwaha (μ)
Codsiyada Geobide Saaxiibada 3 ayaa horay loo qorsheeyey oo ay ku taliyeen IGN ee Waqooyi-galbeed, Gobollada Bartamaha iyo Bariga Xeebta, siday u kala horreeyaan.
Sida aad u arki karto natiijooyinka ma kala duwanaan inta u dhaxaysa hababka 3 ee ugu dambeeyay, laakiin marka hore. Taasi waa sababta aad u ogaato haddii isbeddelka uu ubaahan yahay mid ka mid ah xulashooyinka horay u sii kordhay.
Waxaa ka mid ah ED50-xxN (EPSG: 230xx) nidaamyada iyo ETRS89-xxN (EPSG: 258xx) ee degaanka of Spain laftiisa waa in la isticmaalaa sida Datums ah / ellipsoids ED50 iyo ETRS89 / WGS84 ma yihiin wax u dhigma.
Tusaale ahaan, haddii Geomap ma kuwaas oo xogta sare, xogta laga Navarra in ED50-30N (EPSG: 23030) reprojected on Daqsi xogta ay bixiyaan Khariidadaha Google (ellipsoid WGS84) dhaqaajin doono. Si aad si fiican u haboon, waxaa lagama maarmaan ah in ay isticmaalaan transformations ugu saxda ah ee aad hore u sharaxay.
aad u wanaagsan in Geobide sameeyaan dadaal weyn ma aha oo kaliya in ay ka baxaan awoodaha si aad nidaamka, laakiin sidoo kale si aad qoraal ah oo faahfaahsan yar arrintan tan iyo markii ay si weyn u saamayn kartaa tayada iyo saxnaanta shaqada, aan ahayn oo keliya ay aad u fahmaan waxaan dareemayaa waa dadaal kale.
Ilaa hadda, waxan oo dhan si toos ah ayaa waxaa lagu daray engine ah, laakiin sida aan uga hadashay asxaabta ee Geobide, dalabaadka user ah ayaa iyaga inuu ka tago arki karo in codsiyada user ah in laga war hayo waxaa ka mid ah iyo xitaa la beddelo qaabka caadiga ah, ama mid kale u dhig goobta shaqadaada.
Isbeddelka ellipsoidal / dhererka geoidal
Marka la eego qaabka cusub, sanduuqa xisaabinta farqiga u dhaxeeya xarriiqda ellipsoidal / juqraafiga ayaa sidoo kale la bedelay si qofka isticmaala uu hadda u dooran karo habka matoorka loo isticmaalo.
Foomka Nomenclatures PRJ
Ugu dambeyn, isbeddel kale oo kugu habboon dadaalka wada shaqeynta oo leh heerarka OGC ama dhaqamada barnaamijyada caanka ah. Faylasha PRJ ee Geobide soo saartaa waxay ku jiraan magaca OGC WKT, taas oo ah heer lagu aqoonsado qalab badan oo CAD / GIS ah. Maaha sidaas oo loo adeegsanayo codsiyada ESRI, kuwaas oo PRJ, inkastoo ay ku jiraan qeexida xisaabeed ee la midka ah kuwa ugu sarreeya, waxay u dhigmaan nidaamka Isku-xirnaanta si kala duwan.
Marka la eego feylka PRJ ee OGC, nidaamka ETRS89-30N (EPSG: 25830) waxaa lagu qeexay magaca code "ETRS89 / UTM 30N"; codsiyada ESRI, halkii loo yaqaan "ETRS_1989_UTM_Zone_30N". Haddii ArcGis aan isku dhejinno lakabyada PRJs ee labada magac ee noocan ah software wuxuu samayn doonaa isbedelka xitaa xitaa marka qeexidda xisaabinta ee Isku-xirka Qiimaha isku midka ah.
Bixinta fiiro gaar ah madax adag, Geobide wuxuu awood u yeeshay xulasho cusub ee xulashada nidaamka tixraaca si qofka isticmaala uu tilmaamayo haddii uu rabo Nidaamka Isku-xirnaanta ee PRJ ee qaabka EPSG ama style ESRI.
Post Previous«Previous GPS size size silsilad muhiim ah iyo telefoonada off-road
Post Next Woopra wuxuu yimid iPadNext »